बालबालिकालाई हर्निया- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
बच्चाहरूलाई हर्निया भए जति बेला शल्यक्रिया गरे पनि हुन्छ भन्ने समाजमा भ्रम छ । तर ढिलो शल्यक्रिया गराउनुले जटिलता बढाउँछ ।
चैत्र २४, २०७४ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — हाम्रो मुलुकमा बालबालिकासम्बन्धी शल्यक्रियामध्ये १५ प्रतिशतजति हर्नियाका कारण हुने गर्छ । हामीलाई पत्याउन गाह्रो भए पनि के सत्य हो भने, यो समस्या बालबालिकामा सामान्य रूपले देखिनेमध्ये एक हो ।
तस्बिर सौजन्य : लाइकमेडिक डट कम
यो समस्या शिशुहरूमा जन्मजात पनि हुन सक्छ । नवजातदेखि १६ वर्षसम्मलाई शल्यक्रिया, पेडियाट्रिक सर्जरी अर्थात् बाल शल्यचिकित्साअन्तर्गत आउँछ ।
चिकित्सा तथ्यपत्रअनुसार, हर्निया १० वर्षमुनिका र ४० वर्षमाथिकामा हुने सम्भावना बढी हुन्छ । सबै उमेर समूहमा हर्निया देखिने भए पनि बालबालिकामा गरिने सबैभन्दा सामान्य शल्यक्रिया हर्नियासम्बन्धी नै हुन्छ ।
हाम्रो शरीरभित्र केही अंगमा खोक्रो ठाउँ हुन्छ । ‘बडी क्याभिटी’ भनिने यो ठाउँ छालाको सूक्ष्म आवरण (मेम्ब्रेन) अर्थात् झिल्लीले ढाकिएको हुन्छ । जतिखेर यो झिल्ली च्यातिन्छ, तब अंगको केही भाग निस्किने समस्या नै हर्निया हो । अझ सामान्य भाषामा, आम रूपले देखिने समस्यालाई इंगित गर्दै भन्ने हो भने, पेटको मांंसपेशी कमजोर भएको ठाउँबाट पेटको खण्ड, आन्द्राबाहिर निस्किने समस्या नै हर्निया हो ।
‘हाम्रो मुलुकमा बालबालिकामा हुने विभिन्न समस्याअन्तर्गतका कुल शल्यक्रियामध्ये करिब १५ प्रतिशत स्थान हर्नियाको अप्रेसनले ओगटेको छ,’ वरिष्ठ बाल शल्यचिकित्सक डा. आरपी चौधरी भन्छन् ।
बालबालिकालाई शल्यक्रिया गराउनुपर्ने नामले नै अभिभावक तर्सने गर्छन् । उनीहरू अन्य वैकल्पिक उपाय रोज्दै जसरी पनि शल्यक्रियाबिना नै स्वास्थ्यस्थिति सामान्य पार्ने प्रयास गर्छन् । तर विज्ञहरूको धारणा फरक छ । हर्निया पहिचान भएपछि जति छिटो शल्यक्रिया गरेर रोगबाट मुक्ति पाउनुपर्छ ।
‘बच्चाहरूलाई हर्निया भए जति बेला शल्यक्रिया गरे पनि हुन्छ भन्ने समाजमा भ्रम छ,’ डा. चौधरी भन्छन्, ‘तर ढिलो शल्यक्रिया गराउनुले जटिलता बढाउँछ ।’
बिरामीको पेटको तल्लो भागमा गाँठो वा सुन्निएको हुनु, रुँदा, चिच्याउँदा वा खोक्दा पेटमा गाँठो देखिनु र सुत्दा त्यो हराउनु भनेको हर्निया हुन सक्ने लक्षण भएको डा. चौधरी औँल्याउँछन् ।
हर्निया खास गरी पाँच प्रकारका हुन्छन् :
१. इंगुइनल हर्निया : यो हर्निया तिघ्राको जोर्नीमा हुन्छ । अण्डकोषमा थैलो झर्छ र यसको आकार बढ्दै जान्छ । यो हर्नियामा बिरामीको उपचार गर्न धेरै ढिलो भए अण्डकोष सानो हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । समस्या देखिएकाहरूमा यो हर्निया इंगुइनल हो कि हाइड्रोसिल भन्नेचाहिँ छुट्टयाउनैपर्छ । ‘किनभने हर्नियाको उपचार तुरुन्त गर्नुपर्छ, हाइड्रोसिलको उपचारका लागि दुई वर्षसम्म कुर्न सकिन्छ,’ डा. चौधरी भन्छन्, ‘हाइड्रोसिलको समस्या भए दुई वर्षसम्ममा आफैँ पनि निको हुन सक्छ ।’
२. अम्भिलिकल हर्निया : यो हर्नियामा पेटको सबैभन्दा कमजोर मांसपेशी, हर्नियाको थैलो नाइटोबाट बाहिर निस्किन्छ । यो हर्निया कमजोर मांसपेशी भएकाहरूमा हुन्छ । यो हर्नियामा आन्द्रा अड्किने सम्भावना पनि हुन्छ । सानो अम्भिलिकल हर्निया भए दुई वर्षसम्मको उमेरमा आफंै पनि निको हुन सक्छ । तर ठूलो हर्निया भए छिटो शल्यक्रिया गर्नु आवश्यक हुन्छ । जटिल स्थितिमा आन्द्रा अड्केर बालबालिकालाई असाध्य पेट दुख्ने, वान्ता हुने र बाहिर निस्किएको आन्द्रामा उचित रक्तसञ्चार नहुँदा कुहिनसमेत सक्छ ।
३. कन्जेनाइटल डाइफ्राग्मेनिटक हर्निया : यस्तो हुँदा आन्द्रा, पेट र छातीबीच भएको झिल्लीमा प्वाल भएर छातीमा पुग्छ । यो समस्या शिशु गर्भमा रहँदासमेत अल्ट्रासाउन्डका माध्यमले थाहा पाउन सकिन्छ । करिब २० साताको गर्भ परीक्षण गर्दा यो समस्याबारे थाहा पाउन सकिन्छ । यस्तो जानकारी भए राम्रो स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर उपचार गराउनुपर्छ । गर्भावस्थामा यो समस्याबारे थाहा नपाइए, जन्मपछि शिशुमा छिटछिटो सास फेर्ने लक्षण देखिए यो रोग भएको हुन सक्ने भन्दै डा. चौधरी थप्छन्, ‘जन्मपछि छाती र पेटको साधारण एक्स–रेबाट पनि यो रोगबारे थाहा पाउन सकिन्छ ।’ अल्ट्रासाउन्ड र सिटी स्क्यानले यो समस्या भए/नभएको किटान गर्न सकिन्छ । रोगबारे थाहा पाएपछि शिशुको श्वास–प्रश्वासको अवस्था सही पारेर शल्यक्रिया गरिन्छ । यस्तो शल्यक्रिया सानो प्वाल पारेरसमेत गर्न सकिन्छ ।
४. फेमोरल हर्निया : यस्तो हुँदा पेटको अंग, खुट्टातिर तिघ्राको नसाको मुखबाहिर निस्किन्छ । यो नसाले खुट्टामा रगतको आपूर्ति गर्ने काम गर्छ । यस्तो हर्निया पुरुषको दाँजोमा महिलालाई बढी हुन्छ ।
५. इनसिजनल हर्निया : यसमा पुरानो शल्यक्रिया भएको ठाउँबाट अंगविशेष बाहिर निस्किन्छ ।
-पेटको बोसो वा आन्द्रा बाहिरतर्फ निस्किनु ।
- छालामुनि डल्लो वा गाँठो निस्किनु ।
- गाँठोमा गाह्रोपना र दुखाइ हुनु ।
- उभिँदा, मलमूत्र त्याग्दा समस्या हुनु ।
विशेषज्ञहरू भन्छन्– हर्नियाको सफल र प्रभावकारी उपचार शल्यक्रिया नै हो । थुप्रै विधिले यसको शल्यक्रिया गरिन्छ । बालबालिकाको क्षतिग्रस्त भागलाई शल्यक्रियाबाट चिकित्सकले मर्मत गर्छन् । अचेल दूरबिन पद्घतिले समेत शल्यक्रिया गरिन्छ । जुन ठाउँमा शरीरभित्रको अंग बाहिर आउँछ त्यो ठाउँलाई बलियो बनाउन विभिन्न चिकित्सकीय प्रक्रिया अपनाइन्छ । यसअन्तर्गत कहिलेकाहीँ ‘म्यास’ (जाली) को समेत प्रयोग गरिन्छ । यसरी त्यहाँबाट पुन: अंग निस्किने सम्भावना निकै कम हुन्छ ।
प्रकाशित : चैत्र २४, २०७४ ०८:३०
फस्टाउँदो गुराँस पर्यटन
चैत्र २४, २०७४ चन्द्र कार्की
तेह्रथुम — म त लाली गुराँस भएछु वनैभरि फुलिदिन्छु, मनैभरि फुलिदिन्छु...साहित्यकार क्षेत्रप्रताप अधिकारीका शब्दमा स्वर सम्राट् नारायण गोपालले गीतमा भनेझैं पूर्वी पहाडको वसन्तपुरदेखि मिल्के भञ्ज्याङसम्मका लेकाली वन पाखाहरू यतीबेला राताम्मै छन् ।
तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लेजुङको संगमस्थल तीनजुरे मिल्के जलजले (टीएमजे) क्षेत्र थरीथरीका गुराँस फूलले फेरि पनि पर्यटक तान्ने अभियानमा छ । रंगीबिरंगी रूपमा जंगलभरि फुल्ने गुराँसले यो क्षेत्रको सौन्दर्यलाई उजिल्याएको छ ।
यी तीन जिल्लाको संगमस्थल टीएमजे अर्थात गुराँसको राजधानी । नेपालमा पाइने ३२ प्रजातिका गुराँसमध्ये यस क्षेत्रमा २८ प्रजातिका गुराँस आफ्ना रहर लाग्दा बैंस देखाउँदै तँछाडमछाड गर्दै फुल्ने तयारीमा छन् । गुराँसले मात्र होइन, पोखरी, सुन्दर ग्रामीण पहाडी बस्ती, मकालु र कञ्चनजंघा हिमशृंखला, एउटै उचाइको रमणीय पदमार्गलगायतले यो क्षेत्र यतिबेला उज्यालो भविष्यतर्फ लम्किरहेको छ । ‘अबको केही दिनपछि पूरै जंगल गुराँस फूलले राताम्मै देखिन थाल्छ,’ चौकी बजारमा रहेको लालीगुराँस होटलका सञ्चालक उदयकुमार लोले भने ।
वसन्तपुरबाट थोरै अगाडि बढेर टुटेदेउराली नपुग्दै मनोरम गुराँसको जंगलले स्वागत गर्छ । मकालु र कञ्चनजंघा हिमालको आधार शिविरलाई गन्तव्य बनाउने र अरुण र तमोर नदीको छालमा र्‍याफटिङ गरी आनन्द लिनेहरूलाई लोभ्याउन सक्ने प्राकृतिक सौन्दर्य पनि यो क्षेत्रसँग छ । वर्षको आठ महिना कुमारी रहने यो क्षेत्र गुराँस फूलकै कारण आन्तरिक तथा बाहय पर्यटकको मुख्य रोजाइमा पर्ने गर्छ । भारतको विहार र दार्जिलिङबाट नजिकको दूरीमा रहेको यो क्षेत्रमा त्यहाँका सौन्दर्यप्रेमीको ओहोरदोहोर केही वर्षदेखि चलिरहेको छ । स्थानीय बासिन्दामा गुराँस पर्यटनको अर्को ढोका पनि खुलेको छ ।
जति हेरे पनि नअघाउने विविधता बोकेको गुराँसको सौन्दर्यमा रमाउन आएका आन्तरिक तथा बाहय पर्यटकले तेह्रथुमको वसन्तपुरदेखि संखुवासभाको गुफा बजारसम्मका होटल तथा लजहरू भरिन थालेका छन् । वनभरि बैंस फक्राएर फुल्ने रंगीचंगी गुराँस, बाटाभरि भेटिने चौरी र खच्चडको लस्कर, ठटेउली पारामा गीत गाउँदै पिठयुँभरि भारी बोकेर हिँडडरहेका भरिया, ठाउँठाउँमा देखिने नागी र पोखरीहरू पर्यटकको मन लोभ्याउने थप आकर्षणहरू हुन् । वसन्तपुरमा सवारी साधन छोडेर उकालो लागेकाहरूको पदयात्राभर शुद्ध कोदोको तोङ्वा र सुकुटीको खान्की बिर्सी नसक्नुको हुन्छ । छुर्पी, गुराँसको जुस र ऐंसेलु र चुथ्रोको वाइन यस क्षेत्रका चाख्नैपर्ने खान्की हुन् । गुराँस संरक्षणको अभियानमा लागेका प्रदेश सभासदसमेत रहेका राष्ट्रिय लालीगुराँस संरक्षण व्यवस्थापन समितिका संयोजक लक्ष्मण तिवारी यो क्षेत्र विश्वभरिका पर्यटकका लागि गुराँस अध्ययन अवलोकन र सौन्दर्यका लागि पहिलो गन्तव्य बनेको बताउँछन् ।
काठमाडौंबाट ३५ मिनेटको हवाई यात्रापछि विराटनगर आइपुगिन्छ । यहाँबाट चार घण्टाको सवारी साधनको यात्रापछि गुराँसे वनको प्रवेशद्वार वसन्तपुर पुगिन्छ । यहाँबाट सुरु हुने टीएमजेमा २ सयभन्दा बढी प्रजातिका वनस्पतिहरू पाइन्छन् । तँछाडमछाड गर्दै फुलेका प्राकृतिक गुराँस वनले पदयात्रा अवधिभर स्वागत गरिरहेझैं लाग्छ । तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लेजुङका २३ गाविस क्षेत्रफलको अरुण र तमोर जलाधार क्षेत्रमा पर्ने टीएमजेमा गुराँसको सबैभन्दा अग्लो र होचो प्रजातिसमेत फुल्न थालेका छन् ।
यस क्षेत्रको गुराँस संरक्षणमा केही वर्षअघिसम्म सहयोग गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) का अनुसार टीएमजे क्षेत्रमा ८० हजार जनसंख्या बस्छ । यस क्षेत्रमा गुराँसका रैथाने र नयाँ प्रजाति पनि भेटिने क्रम जारी रहेको आईयूसीएनले सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकमा उल्लेख छ । १ हजार ५ सयदेखि ५ हजार ५ सय मिटर उचाइमा फैलिएको यो क्षेत्र जैविक तथा सांस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक स्रोत र सौन्दर्यको हिसाबले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
वनैभरि फुलेका विविध प्रजातिका रंगीबिरंगी गुराँस, सेताम्मे हिउँ, पदमार्गभरि भेटिने भारी बोकेका चौरी र खच्चडका लावालस्कर, मनोरम गुफापोखरी, स्विटजरल्यान्डको झझल्को दिने चौकी बजार, एसियाकै लामो हयात्रुङ झरना, जलजला पोखरी, लामपोखरी, रातपोखरी, पाँचपोखरी, चिचिलिङ पोखरी, विभिन्न गुफा अनि उच्च स्थानमा रहेका ताल तथा नागी र विभिन्न जातजातिको साझा सांस्कृतिक रहनसहनले पनि यस क्षेत्रमा आएका पर्यटकको मन जित्ने गरेको गुफा बजारबासी मकालु होटलका सञ्चालक हरि खनालले बताए ।
गुराँस भूमि भएर पदयात्रा गर्नेहरूका लागि यो रुटमा रहेका वसन्तपुर, टुटेदेउराली, घुर्मिसे, पाँचपोखरी, चौकी, लामपोखरी, मंगलबारे, श्रीमाने, गुफा बजारलगायत स्थानमा बसोबास गर्ने विभिन्न जातजातिका पञ्चेबाजा, बालन नाच, गुरुङ नाच, संगीनी नाच, शेर्पा नाच, धान नाच, च्याब्रुङ नाच, लामा नाच तथा भजनकिर्तनको मनोरञ्जनले गर्दा पर्यटकहरू आफ्नो बसाइ अवधि अरू केही दिन लम्ब्याउँछन् ।
मानव चाप कम रहेको यस क्षेत्रमा पुग्ने जोकोही आफ्नो बसाइ अवधि मनोरम गुराँस वनमा बिताउन लालायित हुन्छन् । सवारी साधनको यात्रालाई केही दिनका लागि चटक्कै छोडेर प्राकृतिक गुराँस वनको भ्रमणमा निस्किएकाहरू रमणीय गुराँस वनको सौन्दर्यमा केही समय भए पनि हराउँछन् । पर्यटन विकास तथा प्रवद्र्धन समिति अध्यक्ष गोविन्द ढुंगाना यहाँको गुराँस वन संरक्षण गर्न सके पर्यापर्यटनको राम्रो सम्भावना रहेको बताउँछन् ।
टीएमजे क्षेत्रको भ्रमणमा आउने पर्यटकले गुराँसको सौन्र्दय लिनेदेखि फूलबाट उत्पादन गरिएको जुस र वाइनको स्वादसमेत चाख्न पाउँछन् । यस क्षेत्रमा यात्रा गर्दा एउटै उचाइका रमणीय पहाड भएर यात्रा गर्नुपर्ने भएकाले उचाइ परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने हाइअल्टिच्युडको समस्या हुँदैन । टीएमजे क्षेत्रमा फुलेका यी गुराँसहरू आफ्ना रहर लाग्दा बंैस देखाइरहेका छन् । जसको अन्त्य कहाँ छ, सामान्य रूपमा छुटयाउन सकिँदैन । उन्मत्त बैंसले मात्तिएजस्तै देखिने यी गुराँस फूलले यो क्षेत्र र वरपरको वातावरणलाई कुत्कुत्याइरहेको छ । गुराँस वनको यात्रामा निस्कनेहरूका लागि वसन्तपुरदेखि मिल्के भञ्ज्याङसम्मको पदमार्गमा होटल तथा लजहरू खुलेका छन् ।
संरक्षणमा लाग्दा लाग्दै सांसद
तेह्रथुम वसन्तपुरका लक्ष्मण तिवारीको बाल्यकालको गुराँस जोगाउने सपना २६ वर्षसम्म पनि पूरा त भएको छैन तर उनी जोगाउने अभियानमा भने निरन्तर लागिरहेका छन् । यही अभियानको नेतृत्व गर्दा गर्दै गत असारमा सम्पन्न प्रदेशसभा सदस्यमा उनी तेह्रथुमबाट निर्वाचित भए । टीएमजे क्षेत्रलाई १ नम्बर प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने मुद्दालाई तिवारीले प्रदेशसभा बैठकमा उठाउने गरेका छन् । पूर्वी पहाडका तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लेजुङमा फैलिएको घना गुराँस वन पातलिदै जाँदा त्यसलाई रोक्न उनले यी जिल्लामा अभियान नै सञ्चालन गरेका थिए । अहिले तिवारीले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । धेरै हदसम्म गुराँस वन फँडानी रोकिएको छ । एउटा युवाले सुरु गरेको ‘गुराँस वन जोगाऔं’ अभियानका कारण अहिले यी जिल्लाका लेकाली वनपाखाहरू वर्षको ३ महिना राताम्मै हुन्छन् । जसका कारण यस क्षेत्रले देशविदेशका पर्यटक पाएको छ । आर्थिक गतिविधि बढेको छ अनि वातावरणीय सौन्दर्य मौलाएको छ ।
गुराँस भन्ने बित्तिकै धेरैको मनमा राष्ट्रिय फूल लालीगुराँसको सम्झना आउँछ । तर, गुराँसका धेरै प्रजाति नेपालकै पूर्वी पहाडमा फुल्छन् भन्ने कमैलाई मात्र थाहा हुन सक्छ । यी तीन जिल्लाको संगमस्थल (टीएमजे) क्षेत्रमा २८ प्रजातिका गुराँस तँछाडमछाड गर्दै फुल्छन् । प्राकृतिक रूपमा फुलेका यी फूलको सौन्दर्य देखाएर स्थानीयले फाइदा लिन सक्ने सपना उनले आजभन्दा २६ वर्ष अगाडि नै देखेका थिए । ‘त्यो सपना अब भने पूरा होला कि जस्तो भएको छ,’ जो कोही सँग भेट हुँदा यहाँको गुराँस सौन्दर्यबारे बताएर नथाक्ने तिवारीले भने, ‘यहाँका बासिन्दाको भविष्य गुराँससँग जोडिएको छ ।’
तिवारीले यस क्षेत्रमा पाइने २८ प्रजातिका गुराँसको संरक्षण गर्न स्थानीयलाई प्रेरित मात्र गरेनन्, गुराँसका साथै लेकाली क्षेत्रको जैविक विविधता र सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्न सके तल्लो कछाड र औल क्षेत्रमा हुने पानीको अभावलाई समेत पूर्ति गर्न सकिने सोच अघि सारे ।
प्रकाशित : चैत्र २४, २०७४ ०८:२९